Kitra - “Arab cup of nation 2020” :: Hanafika any Arabia Saodita ny Barea latsaky ny 20 taona • AoRaha
Kitra – “Arab cup of nation 2020” Hanafika any Arabia Saodita ny Barea latsaky ny 20 taona
Nahazo fanasana hiatrika ny fiadiana ny amboaran’i Arabo, hotanterahina any Arabia Saodita amin’ny 17 febroary hatramin’ny 5 marsa ho avy izao, ny ekipam-pirenena Malagasy taranja baolina kitra sokajy zazalahy latsaky ny 20 taona na ny Barea U20. “Ireo mpilalao teraka tamin’ny taona 2001 noho miakatra no hiatrika izany”, hoy i Jean François Debon, tale teknika nasionalin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra.
Hiray vondrona amin’i Maraoka sy Bahreïn ary Djibouti, ao amin’ny vondrona 2, ny Barean’i Madagasikara. “Efa miatrika fampivondronana eny amin’ny ivon-toerana teknikan’ny federasiona eny Carion, ireo mpilalao tarihin’i Menahely Ruffin, mpanazatra nasionaly, amin’izao fotoana izao. I Rija Juvence Rakotomandimby no hanampy azy. Miisa telopolo mirahalahy izy ireo no nantsoina. Tsy misy mpila ravinahitra izy ireo fa mpilalao avy eto Madagasikara avokoa”, hoy hatrany izy.
Vinavinaina hanainga amin’ny alakamisy ho avy izao ny delegasiona Malagasy. “Vaovao be amintsika ity fifaninanana ity saingy isan’ireo nofidian’izy ireo hiatrika izany isika sy Djibouti ary Sénégal”, hoy ihany i Jean François Debon. Mifanaraka tsara amin’ny vinan’ny federasiona ny fisian’ny fifaninanana ho an’ny tanora toy izao. “Manomboka amin’ity taona ity dia hijery an’ireo tanora mpandimby izahay. Io no antony nahatonga anay hampisy ny fifaninanam-pirenena ho an’ny tanora amin’ity taom-pilalaovana ity”, hoy hatrany izy.
Fanavaozana sanganasa :: Haverina hatonta ireo boky nosoratan’i Dox
Baolina kitra :: Hijery ny toetr’ireo kianja i Nicolas Dupuis